Tiorkia: Am-panoratana Mikasika Ny …. Sakafo Sy Ny Mozika · Global Voices teny Malagasy
Tiorkia: Am-panoratana Mikasika Ny …. Sakafo Sy Ny Mozika
Voadika ny 17 Aogositra 2017 19:25 GMT
Hihazo toerana hafa aho amin'ity herinandro ity. Ndao hiresaka mikasika ny sakafo sy mozika Tiorka. Miresaka mikasika ireo fahafinaretana tsotra azo amin'ny fihinana mofo miaraka amin'ny menaka ôliva vao ny Zen in the Kitchen. Manome topy maso kely amin'ny tantaran'ny zavapisotron'ny firenena Tiorka, Raki, ny Tastes of Mavi Boncuk, ary mampiseho antsika ny mampitovy io Raki io sy ny henabaolina kosa ny Almost Turkish Recipes:
Fanta-daza noho ny rakı-ny (toaka Tiorka vita avy amin'ny voaloboka) sy ny henabaoliny i Tekirdağ, ilay tanàna niaviako. Malaza ny raki ao Tekirdağ satria na dia vita avy amin'ny voaloboka maina aza izy na aiza na aiza aza izy, any Tekirdağ dia vita avy amin'ny voaloboka vao ny rakı. Raha ny an'ny henabaolina kosa, mbola zava-miafina ny fomba fahandro azy io. Tsy dia be mpahafantatra ny fomba fahandro azy, satria tsy misy na iray aza ao Tekirdağ hanao ny henabaolin'i Tekirdağ any an-tranony; mivoaka mankany amin'ny iray amin'ireo trano fisakafoanana an-davitrisa mpandroso henabaolina any an-tanàna ianao raha mila henabaolina.
Ampianarin'ny Yogurtland antsika ny Ashura, tsindrintsakafo izay toa natao tany amin'ny sambofiaran'i Noah:
Intỳ misy tsindrintsakafo nentim-paharazana iray hafa avy any Tiorkia, izay mbola tadiaviko any amin'ny firenena hafa ao amin'ny faritra raha manana ity ao anatin'ny tahiriny izy ireo. Mba hilazao aho azafady raha toa ka mahafantatra kolontsaina hafa manana ity fomba ity ianareo.
Avy amin'ny teny Arabo io anarany io, ny ‘ashura’ izay midika ara-bakiteny hoe ”fahafolo.” Tsindrintsakafo iray izay atao amin'ny andro fahafolon'ny alimanàka Silamo. Koa satria mifototra amin'ny volana ny alimanàka Silamo, latsaka folo andro izy raha oharina amin'ny alimanàka Gregôriana, izay mahatonga an'ity andro ity sy ny andro fety Silamo rehetra hitontona amin'ny andro samy hafa foana isan-taona. Tsy tokony hanafangaro ity tsindrintsakafo ity amin'ny andron'ny ashura ny olona. Na dia mahazatra aza ny mikarakara ity tsindrintsakafo ity amin'io andro io, tsy fombafomba ara-pivavahana izany.
Milaza amintsika ny tantara iray an'ity tsindrintsakafo ity fa vita tany amin'ny sambofiaran'i Noah izy io, vantany vao nifarana ilay tondradrano lehibe. Araka ny hitanareo ao amin'ny lisitry ny sakafo ampiasaina, ny singa fototra amin'ilay tsindrintsakafo dia ireo voa izay tena sarotra ny mampivady azy amin'ny tsindrintsakafo hafa.
Rehefa avy nijery lahatsary tao amin'ny Erkan's Field Diary aho, nizahazaha kely tao amin'ny iTunes aho ary nahita podcast Tiorka sasantsasany mahaliana izay tiako hozaraina aminareo. Namoaka podcast miaraka aminà tafatafa vao haingana nifanaovana tamin'i Tarkan, Tiorka mpanakanto Pop iray, ny bilaogy Tarkan Deluxe. Manana podcast tsy tapaka ny DJ roa ao Istanbul (izay samy mahafinaritra avokoa!) dia ny Turkish House Mix miaraka amin'ny DJ Bulut sy ny DJ Murat Uncuoglu.
Manana ny mampiavaka azy ny Tobin'Onjam-Peon'ny Anjerimanontolo METU (Oniversite Teknika Ao Afovoany-Atsinanana) amin'ny maha onjampeo Tiorka voalohany manomboka mandefa fandaharana tsy an-kiato amin'ny alàlan'ny aterineto sy ny podcast azy.
Ary mazava ho azy fa raha te hanatsara ny fiteninareo ny Tiorka fampiasa amin'ny dia ianareo, afaka mianatra ny teny Tiorka miaraka amin'i Sinan foana.
Izay ary aloha no azoko natolotra anareo androany, podcasts 5 afaka jerena ao amin'ny iTunes, kanefa toa misy firoboroboan'ny tsenanà podcast Tiorka ao. Arakarak'izay voaraiko no hampitako izany aminareo. Mandra-pihaona amin'ny herinandro ambony!